कर्पोरेट/आर्थिक समाचार Archives » Page 378 of 397 » aarthikplus
दार्चुलामा माछापुच्छ्रे बैंकको २ नयाँ शाखा विस्तार
काठमाडौं पुष २९। माछापुच्छ्रे बैंकले दार्चुलास्थित अपि हिमाल र व्याँस शाखा कार्यालय सञ्चालमा ल्याएको छ ।बैंकले दार्चुलाको अपि हिमाल गाँउपालिकास्थित अपि हिमाल शाखा कार्यालय र व्याँस गाँउपालिकास्थित व्याँस शाखा कार्यालयको औपचारिक रुपमा सुरुवात गरेको छ...
साधनाको दोस्रो वार्षिक साधारणबाट हकप्रद शेयर जारी गर्ने प्रस्ताव पारित
काठमाडौँ । गोरखा जिल्ला गोरखा नगरपालिका वडा नं ६ हरमटारीमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको साधना लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले आफनो दोस्रो वार्षिक साधारण सभा होटल गोरखा विसौनिमा सम्पन्न गरेको छ । उक्त साधारण सभाले एक कित्ता...
सामसङ्ग प्लाजा ल्यायो टिभी एक्सचेन्ज अफर
काठमाडौं । के तपाई बैठक कोठामा भएको सीआरटी टिभीले ठाँउ ओगटेर चिन्तित हुनुहुन्छ र नँया टिभी किन्ने योजनामा हुनुहुन्छ ? के तपाई आफ्नो बैठक कोठालाई स्लिम टिभीले सजाएर आर्कषक बनाउन इच्छुक हुनुहुन्छ? तर संकुचित रकमले...
किसान माइक्रोफाइनान्सको ४ हजार कित्ता शेयर लिलामीमा
काठमाडौं पौष २९ । किसान माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेडले जारी गरेको हकप्रदमा बिक्री नभएका ४ हजार कित्ता भन्दा बढी शेयर लिलामीमा आउने भएको छ । माइक्रोफाइनान्सले गत मंसिर २ गतेदेखि पुस ८ गतेसम्म खुल्ला...
किसानको पिँडामा बीमाको मल्हम
दिपक भट्टराई नेपालको कृषि प्रणालीले बिस्तारै फड्रकोे मार्दै छ । परमपरागत शैलीबाट गरिने कृषि प्रणाली विस्तारै आधुनिक र आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरण तर्फ तिर उन्मुख हुने क्रम सुरु भएको छ । किसानहरु आधुनिकरण र...
घट्यो आन्तरिक हवाइ भाडा दर
काठमाडौं पौष २८ । आन्तरिक उडानतर्फको हवाइ भाडा घटेको छ । नेपाल आयल निगमले आन्तरिक हवाइ इन्धनको मूल्य घटाएसँगै वायुसेवा सञ्चालक संघले हवाइ भाडा घटाएको हो । आयल निगमले शुक्रबार आन्तरिक वायुसेवाले प्रयोग गर्ने हवाइ...
शनिबार पनि बैंक खोल्न राष्ट्र बैंकको आग्रह
काठमाडौँ पुष २७ । नेपाल राष्ट्र बैंकले राजश्व जम्मा हुने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा तथा काउण्टर शनिबार बिदाको दिनसमेत सञ्चालन ल्याउन निर्देशन दिएको छ । बैंकका कार्यकारी निर्देशक नारायणप्रसाद पौडेलका अनुसार शनिबार राजश्व बुझ्ने...
५ लाखको बीमासहित एभरेष्ट बैंकले ल्यायो दुई बचत योजना, कर्मचारी र रोजगारदाता दुवै लाभान्वित
काठमाडौं पुष २७ । एभरेष्ट बैंकले विभिन्न दुई वटा बचत योजना सार्वजनिक गरेको छ । बैंकले ग्राहकका लागी बीमा सुविधा प्रदान गर्ने उद्देश्यले ‘मातृभूमि बचत खाता’ र ‘कर्पोरेट स्यालरी खाता’ नामक दुई योजना सार्वजनिक गरेको...
ग्लोबल आइएमई बैंकको १६ प्रतिशत बोनस पारित, चुक्ता पुँजी १० अर्ब नाघ्यो
काठमाडौं पुष २७ । ग्लोबल आइएमई बैंकको प्रस्तावित १६ प्रतिशत बोनस सेयर पारित भएको छ । बैंकको शुक्रबार सम्पन्न १२औँ बार्षिक साधारण सभाले कम्पनीको उक्त प्रस्तावलाई पारित गरेको हो । सभाले पारित गरेबमोजिम अब बैंकका सेयरधनीले...
सिन्धुलीको फिक्कल गाँउपालिकामा प्राइम कमर्सियल बैंकको नयाँ शाखा
काठमाडौं पुष २७ । प्राइम कमर्सियल बैंकले सिन्धुलीको फिक्कल गाँउपालिकामा शाखाको शुरुवात गरेको छ । बैंकको ७२ शाखा कार्यालयकाे स्थानीय उद्योगी, व्यवसायी, शिक्षक, समाजसेवी तथा विभिन्न पेशाकर्मीहरुको उपस्थितिमा फिक्कल गाँउपालिका अध्यक्ष धनबहादुर कार्कीले शाखा कार्यालय फिक्कलको...